Kedu ihe dị New vSphere 6.5 Atụmatụ: vCenter Server
Kedu ihe dị na New na vSphere 6.5 Atụmatụ: Server vCenter
VMware ekwuputala nsụgharị nke 6.5 vSphere na-adịbeghị anya na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị ga-abanye na ọtụtụ ihe ọhụrụ, na-eme ka ọ dị oke ịtụnanya karịa ụdị nke mbụ. Ọ bụ vCenter Server Appliance na-elekọta ihe a na-agbapụta ya ma nwee nkwalite zuru ezu nke onye nhazi ahụ, nke nwere mmetụta dị ugbu a. Enwere ike iji ya na Linux na Mac, tinyere nhọrọ ochie ochie, Microsoft Windows. E nwekwara otu ihe dị ọhụrụ na vCenter Server Appliance nke na-agụnye ihe ọ bụla yiri nke:
6.5 Atụmatụ vSphere
Nnukwu ebe dị elu: The vCenter Server Appliance nwere Nweta High Access naanị maka nsụgharị a. E nwere echiche dịgasị iche iche maka ndokwa a Ọrụ, Ntufe na Onyeàmà Nzube bụ ndị jupụtara ebe niile ma na-egosi ha site na vCenter Server ugbu a. Okpokoro ahụ nwere ike ịda mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na oghere zuru ezu ma o nweghi ohere ọ bụla dị na nke a.
Mbugharị: Ọ bụ ihe dị egwu iji banye vCenter Server Appliance tupu oge ugbu a na ngosi nke ngwa Migration, nke a bụ site na akaụntụ niile dị mfe karịa ma ọ bụ na-arụpụta ihe karịa ka nke 6.0 Update 2m discharge. Ugbu a, ọ na-ele Windows VCenter Server 5.5 na 6.0 na onye ọ bụla nọ ugbu a na-agba ọsọ ikpeazụ nwere ike inweta vCenter Server Appliance n'iji ngwaọrụ a.
Emere na ndabere ma ọ bụ weghachite: Ihe na-aga n'ihu bụ kpamkpam ma ọ na-enye ndị ahịa aka ịbanye na vCenter Server niile na usoro nchịkọta Platform, nke a na-ejikọta ya na VAMI ma ọ bụ API, n'akụkụ VUM na ihe ọ bụla na-ejide onwe ya na ngwa. Ọ gụnyere ndokwa n'ozuzu nke ihe ndekọ nke nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike inweta na onye ahịa kwesịrị iji SCP, HTTP (s), ma ọ bụ mgbakọ FTP (s).
VMware Mmelite Manager: The vCenter Server Appliance ugbu a na-esonyere VUM na ndị ike ike ijide na-enweghị ihe dị iche iche Windows server maka VUM ga-anabata ya. Ndi mmadu ndi nwere ugbua ka ha si na 6.0 redesign process now shifting the VUM baselines and upgrades for 6.5, n'etiti ihe nkwekọrịta vCenter, ngwaahịa, na ntule anya a ga - adikwa otu a.
Enwekwukwa ngwa oru: Ikike a na-enye ikikere n'usoro na mmepe ya na-egosiputa ihe ọ bụla dị iche iche dị ka arịrịọ a na-agbaso. Ogologo ya dịkwuo mfe ma dị mfe iji na-egosi Network na Data Statistics, n'akụkụ mmabe na mbara ala. Otu nwere ike iche banyere CPU na icheta ihe nke ọzọ na-ebelata ịdabere na ntinye ederede ụgwọ maka arụmọrụ siri ike ma na-edebe ọrụ.
Ihe ọzọ ozo bụ Personal Web Client, yana onye na-akwado HTML5 nke dabeere na vSphere Client bụ nke si otú ahụ nye ụlọ ọrụ siri ike ma dị ike maka azụmahịa nke na-eme ka mgbanwe dị elu dị ka a na-ekesa kọwaa, ịbawanye na akụ na ụzụ kọmputa. VMware vSphere 6.5 ga-eweta n'ezie àgwà ọhụrụ na spryness n'ime ọrụ maka ọnụahịa ahịa a ma ama.